Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo la kulmay Wafdi ka socda Qaramada Midoobey | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo la kulmay Wafdi ka socda Qaramada Midoobey
Muqdisho (Halqaran.com)- Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi ka socda QM.
Wafdigan ayaa waxaa hoggaaminaysay wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan ka hor tagga askareynta Carruurta Virginia Gamba .
Soodhaweynta kadib, ayaa xubnaha wafdigu waxa ay kuln la qaateen Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar-Dambe), waxaana ay ka wada hadleen arrimo fara badan .
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaliya ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay in wafdigan maanta muqdisho ay soo gaaraan, isagoo intaas hadalkiisa ku sii daray in inta ay muqdisho ku sugan yihiin ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira ka Hortagga Askareynta Caruurta.
Wafdiga ayaa sidoo kale inta ay ku sugan yihiin Soomaaliya waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan Madax ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya .
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya